Home News Ganacsatadii Reer Baydhabo oo diiday in ay Canshuur Bixiyaan?
Ganacsatadii Reer Baydhabo oo diiday in ay Canshuur Bixiyaan?
Waxaa magaalada Baydhabo ka socday maalmihii la soo dhaafay kacdoon hoose iyo guux dadwayne oo looga soo horjeedo Madaxweyne Sharif Xassan. Guuxaan ayaa ah mid sii kordhaayo maalinba maalinta ka danbeeysa. Dabayaaqadii asbuucii hore ayaa ay ahayd markii beesha Liisaan ay calaaqaadka u gooysay Sharif Xassan ayaga oo u sheegay “in ayan intaa ka badan dulmigiisa dusha u saarnaan karin”. Talabadaan ayaa waxaa ku xigtay in ganacsatiidii yar-yarayd ee ganacsiga ku lahayd magaalada Baydhabo ay diidaan in ay gabi ahaanba bixiyaan canshuurtii laga qaadi jiray iayaga oo sheegay in “lacagta laga qaado gancasatada ay jeebka u gaasho Sharif Xassan iyo walaalihiis iyo koox isaga waxa la cunto”
Sharif Xassan ayaa kulan la qaatay ganacsadatada laakiin waa ay ku gacan seereen. Waxa uu balan qaaday in uu sixi doono qaladaadka jira, laakiin waa ay ka biyo diideen iyaga oo sheegay in dhiigooda aan mar kale loo isticmaali doono dano gaar ah. Ficilkaan ay qaadeen ganacsatada reer Baydhabo ayaa waxaan shaki ku jirin in ay dhaawac gaarsiin doonto maamulka Sharif Xassan. Dhanka kale waxaa dad badan is waydiinayaa in ganacsatada reer Muqadisho ay iyaguna cashar ka baran doonaan gancasatada reer Baydhibo
Previous articleShirka Soomaaliya ee ka dhaci doono Brussels oo isku badalay fadhi ku dirir. Dan Soomaaliyeed ma ku jirtaa in dowlada tagto?
Next articleQarixii ka dhacay Itoobiya hal saac gudahooda ayuu ku dhaleceeyay kii Muqadishana kama hadlin? Max ka khaldan Madaxweyne Farmaajo?
Haweenka Bulshada Rayidka Ah oo Baaq u Diray Xildhibaanada Taagersan Xukumada...
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan xasaasi ah yeelanaya